ဒီဖက်နှစ်မှာ ကျွန်မ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သမျှစာအုပ်တွေအတွက် ခံစားမှုတွေပြန်မျှဝေတဲ့ ပိုစ့်မရေးဖြစ်တာကြာပေါ့...။ တကယ်တော့ 2017 ဟာ ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာစာအုပ်တွေကိုချည်းပဲ ဖတ်မယ်လို့အားခဲထားခဲ့တာပါ..။ ဆရာကြီးရဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း တော်တော်များများ ၀ယ်စုဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ဒီကြားထဲ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲမှာ ကိုယ့်ဖေးဘရိတ်စာရေးဆရာတွေရဲ့ စာအုပ်ကိုတွေ့ရင် မ၀ယ်ဘဲမနေနိုင်လို့ ၀ယ်ထားဖြစ်ခဲ့တာတွေက ဆယ့်သုံးလေးအုပ်ရှိနေပြီ..။ ဒီ2017 မှာ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မအားတဲ့ကြားထဲကနေ စာအုပ်ဖတ်ဖို့အချိန်ကိုပေးရ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပြေးရ ဘလော့ကိုလည်း ပုံမှန်စာလေးတွေတင်နိုင်ဖို့ ရေးရနဲ့ တစ်ပတ်စာအိမ်အလုပ်တွေကို သိမ်းကျုံးရနဲ့ လုံးချာလိုက်နေတဲ့ နှစ်ဆိုပါတော့..။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အလုပ်နဲ့ အချိန်ကုန်ရလို့ ပင်ပန်းတယ်မထင်ပါဘူး..။ လူရောစိတ်ရော အဟာရပြည့်ဝတဲ့ ကျေနပ်စရာဘ၀တစ်ခုပါ..။
ဒီနှစ်ထဲမယ် ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်ဖတ်နည်းဖတ်ဟန်လေးကို စည်းကမ်းချိုးဖောက်မိတယ်...။ ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာစာအုပ်တွေကိုချည်းပဲဖတ်မယ့်နှစ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သတ်မှတ်ထားပေမယ့် စာအုပ်အများဆုံးဝယ်ဖြစ်တဲ့ နှစ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်..။ ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာရဲ့ စာအုပ်တွေအပြင် ဆရာကြီးဇော်ဂျီ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ် ဆရာပါရဂူ ဆရာသုမောင် ဆရာမင်းလူ ဆရာလကာင်္ရည်ကျော် ဆရာမသန်းမြင့်အောင် ဆရာမောင်သာချို ဆရာမ မသီတာ(စမ်းချောင်း) စတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ စာအုပ်တွေကိုပါ ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်နေတယ်..။ ဆရာမင်းလူရဲ့ “သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဆို နှစ်ခါပြန်တောင်ဝယ်မိသွားခဲ့တယ်...။ တစ်ယောက်ယောက်ကို မဲပြန်ဖောက်ပေးမယ် လိုချင်သူများ ပထမဆုံးကော်မန့်လာပေးတဲ့သူကို စာတိုက်ကတဆင့်ပို့ပေးပါ့မယ်လို့...တကယ်ပြောတာနော် မနောက်ဘူး...။ ပို့ပေးရမယ့် လိပ်စာအပြည့်အစုံကို coralnyo@gmail.com နဲ့ပို့လို့ရပါတယ်...။ အဲဒီစာအုပ်လေး အရမ်းကောင်းတယ် ကျွန်မ ဖတ်လက်စလေးပဲရှိသေးတာ...။ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးကို တစ်ခန်းတစ်ခန်းစီပဲ ဖတ်ဖြစ်နေတယ် တစ်အုပ်ခုထိမပြီးသေးဘူး...။
ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းဆီကနေရလာတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အသိအမြင် ခံစားမှုရသတွေကို ခါတိုင်းလိုပဲ ရေးပြချင်ပါသေးတယ်..။ အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်လတစ်ခါရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း စာဖတ်ဖြစ်သွားတောင် motivate လုပ်နေတာ ..း)
Posted by coral nyo at 00:12
Are you sure? Can you able to mail California, USA?
I visit your blog occasionally. This is my first comment and I want to see your challenge whether you will do or not.
Just kidding. Send someone comments from local.
7 September 2017 at 12:03
အပေါ်က နှစ်ယောက်စလုံးက အမေရိကားကချည်းပဲ ပထမဆုံးကော်မန့်ပေးသူကိုပို့ပေးမယ်လို့ပြောထားပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံးကိုပို့ပေးပါ့မယ်..လိပ်စာပေးကြပါ...း)
7 September 2017 at 23:47
8 September 2017 at 00:11
အရင်ဆုံးကော်မန့်လာပေးတဲ့ Roger က သူရမယ့် စာအုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒီစာအုပ်ဖတ်ချင်တဲ့သူကိုပဲ ပေးပေးပါတဲ့ နောက်ဆုံးလာမန့်တဲ့ ဖက်တီးလေး ကိုပို့ပေးချင်ပါတယ် လိပ်စာပို့ပေးပါရှင့်..။ ဒုတိယ ကော်မန့်က ဖြိုးကလဲ အမေရိကားကမို့ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် လက်ဆောင်ပေးပါ့မယ်..း)
13 September 2017 at 23:08